Nanaitra ahy: Maro tsy araky ny heverina ireo Manamboninahitra Miaramila sy Polisy te hampandroso marina ny Firenena
jeudi, 29 mars 2018 13:21
Nisy Manamboninahitra ambony iray, nanao Jery atrika nanome salut aho, sady nanambara, "Vonona izahay Président, maro aminay no mitovy hevitra aminao hanafoana ity kolikoly ity ary ho an'ny Fahaleovantenam-pirenena".
Namaly salut azy moa aho ary noraisiko ny tanany.
Niresaka maharitra izahay ahafantarako ny tena zava-misy iainan'izy ireo sy ny soso-kevitra hitandreo anatsarana ny asan'izy ireo.
Mankasitraka an'ireo Manamboninahitra Miaramila, Zandary, Polisy ary vata Miaramila manana izany fahavononana izany.
Omentsika ny Hasiny tokoa ny asatsika ao amin'ny Tafika, Zandarimaria, Polisy, Pompier, Mpiandry ny Fonja, Mpiandry ny ala.
Ny azoko efa lazaina aloha, dia tsy ianareo intsony no iantoka ny akanjo sy ny fitaovana entinareo miasa, fantatro manko fa akana manodidina ny 200 000 ariary ny karamanareo amin'ny vidin'ankajo, izay fitaovana entinareo miasa ireny.
Omentsika lanjany ny maha Manamboninahitra anareo, ka hanao encadrement ireo Service National rehetra, na ireo sivily tsy manana asa rehetra ianareo.
Apetraka ho adidinareo izany, miaraka amin'ireo Service National ireo, ny famakiana làlana, ny fanamboarana ny tetezana, ny làlana amoaham-bokatra, ny fanamboarana sekoly, ny hopitaly, ny lakan-drano, ny toha-drano, ny fambolena midadasika, ny fiompiana, ny fambolen-kazo mba ho maitso ity Firentsika ity fa tsy ho tanin-gazana intsony, ny fampidirana rano madio, ny fanamboarana trano fonenana, ny famonjena amin'ny rivodoza, ny hay trano, ny famonjena ny olona tra-doza, fampianarana mamaky teny sy manoratra, fikarakana ny beantitra, ny ankizy...
Tsy latsan-danja ary mavesatra ny famerenana ny fandriam-pahalemana, ny famongorana ny asan-dahalo, ny vaky trano andrenivohitra sy ambanivohitra, ny fandringanana ny mpanao kidnapping, fifehezana ny harem-pirenena, ny fiandrasana ny sisin-tany sy ny ranomasina ary ny fivezivezena anabakabaka, ny renseignements généraux sy ny asa fitsikilovana, fijerena ireo sakafo lany daty, fihatrehana ny valan'aretina, ny famonoana moka sy parasy mpitondra sy mpamindra aretina, ny fanaraha-maso ireo olona mpanao maloto etsy sy eroa, fanaraha-maso ny zaza mingitrika tsy mianatra. Izay no maha défense nationale anareo.
Tsy ho latsa-danja amin'ny karaman'ny service national ny karamanareo arakaraky ny grade sy ancienneté misy anareo.
Tsiahivina fa ny Service National dia mandray karama:
Licence miakatra: 1 000 000 ariary isam-bolana
Bac miakatra: 500 000 ariary isam-bolana
Latsak'izay: mandray 200 000 ariary isam-bolana
Ambonin'izay karama izay izany, ny karamanareo Miaramila arakaraky ny grade sy ny fiofanana ary ny andraikitra tazominareo.
Arindra tsy hisy ny kolikoly amin'ny fampidirana mpianatra ho Manamboninahitra, ny rengagement, arindra ny fampakarana grade, mba ny fahamendrehana sy ny fiofanana voaray tokoa no hiakarana grade fa tsy resaka politika na kolikoly na fahafantarana olona no anjaka amin'izany.
Alefa retraite d'office ireo Manamboninahitra Jeneraly ambony tokony ahazo izany. Omena izay karama sy Voninahitra sahaza azy izy amin'izany.
Olona opérationel no ilaina, na araka traikefa, na ara-piofanana, na ara-batana, hamafisina izany ny test physique isan'ambaratongany fa tsy ekena intsony ny be kibo mibaiko fotsiny ambony latabatra.
Amintsika Miaramila moa dia mipetraka ny fizokiana, ka ireo Zoky dia ahazo ny tandrify azy tokoa, na ny andraikitra apetraka aminy na ny karamany.
Atao professionnel ny asatsika, tapitra ny gaboraraka sy ny fanamparam-pahefana, sazy enjana no miandry ireo mpanao kolikoly.
Anamboarana trano hipetrahana ny Miaramila sy ny Polisy.
Jerena manokana ny fianakaviana satria isika dia mety voaantso amita iraka, ary tsy mipetraka ela amin'ny toerana iray. Nefa ny ankizy mianatra, ny vady mety miasa, tsy afaka ny anaraka antsika hatrany.
Rehefa retraite, dia maro no sahirana, nefa nanao adidy goavana niatra aman'aina teto amin'ny Firenena.
Eo amin'ny 20 millions de dollar eo ny vidin'ny avion de chasse F-16 iray, i Maroc nividy 24, teo amin'ny 2.4 milliard de dollars, hatramin'ny fananganana sekoly ambony mampiofana ny tafika anabakabaka.
Mety vola tokony hanaovaona zavatra hafa hoy ny sasany, tsy mila fitaovam-piadiana isika hoy ny hafa, tsy misy anafika isika hoy ny sasany, fa izay ilay mila mijery lavitra, tsy misy anome anao Fahaleovantena izany raha malemy ianao, tsy voatery hiady, nefa rehefa mampiseho fahavononana ary manam-pitaovana hiatrika ny hafa ianao, dia mandinika in-telo izy vao mitsabaka amin'ny raharaha tokan-tranonao.
Raha 6 fotsiny aza ny avion de chasse F16 na Mirage na Rafale na SU-30 Russe, azontsika ety ampiandohana ka andaniana 300 millions de dollars hatramin'ny fiofanana, dia ampiditra vola tsy latsaky ny 6 milliards de dollar ireo satria ny bois de rose tsika conteneur 2000 izay nanjavona dia ho voafehy, ny azandranomasina izay mampiditra amintsika 5 millions de dollar isaky ny sambo, isan-taona, ka raha sambo 100 no mandoa ara-dalàna io haba io dia efa mampiditra 500 millions de dollars isan-taona amintsika izany.
Ho fehezintsika ny harenatsika hividianana fitaovam-piadiana sahaza ny vanin'andro ankehitriny, mila manana fahaleovantena ara-tafika isika, na ny fiandrasana ny sisintany izany na ady atao amin'ny tsy fahandriam-pahalemana, na ny fiarovantsika ny tanintsika izay bodoan'olona. Ao ny hélicoptère de combat armé, ny basy, ny protection, ny ankanjo, ny fiara vaventy.
Ataotsika veloma farany ny MAS36. Tsy te ahita an'ireny iambozonanareo intsony aho, basy nentina amonoana anareo ireny satria na ny basy gasy aza mbola tsara, sy maivana noho ireny, nefa ny bala avoakany dia fahanana tsirairay.